အမျိုး ဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကို မျှဝေရေးသားလာခဲ့တဲ့ ခင်သဇင် – Shwe Nay Chi
အမျိုး ဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကို မျှဝေရေးသားလာခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်
မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီး ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ်အားပေးလက်ခံမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ခင်သဇင်က လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်း ဖေ ဖော်ဝါရီလအစတည်းကတိုင် ပရိသတ်တွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ် တည်ကာ အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက် ကြိုး စားခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်…..။
ခင်သဇင်က မကြာသေးမီကလည်းသူမရဲ့Facebook စာ မျက်နှာမှာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင် းနဲ့ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ “အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးမ တရားတော်နဲ့ အညီ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်တာဖြစ်တယ်..
ဘုရားကျောင်းကန်ဆောက်တာ သာသနာ ပြုတာလို့ မခေါ်ဘူးတဲ့… လူတွေက ဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို အကြောင်းပြုပြီးအလုပ်တွေ ကြိုးစားခြင်းနဲ့ သာ ကျောင်းကန် ဆောက်လုပ်ပေးကြခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့… ဘုရားရဲ့အဆုံးအမ စကားတော်နဲ့ နေခြ င်းသာ သာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့….။
သာသနာဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ သာလျှင်ဖြစ်တ ယ်… (ယနေ့ နာဖြစ်သော တရားတော်မှ မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတ ယ်) ??????ရည်ညွှန်းတရားတော်- စေတနာကောင်းလျှင်ကံကောင်းမည်၊ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ။ ??????အဲတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှော က်တယ်ဆိုတာ
ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက် ဘုန်းကြီးကိုရှိခိုးပြနေတာတွေက သာသနာ ပြုတာ မဟုတ်ပါကြောင်း ..မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်နဲ့ မညီသော ကိစ္စရပ်တိုင်းဟာသာသနာ ကို ကာကွယ်နေတာ မဟုတ်ပါကြောင်း ယနေ့ နာယူဖြစ်သော တရားတော်မှ မျှ ဝေလိုက်ပါတယ် ??????
အလှူကြောင့် ကုသိုလ်ရတာ တပိုင်းပေမယ့်လို့
အကုသိုလ်တွေ ရင်ထဲများနေရင်တော့ ဆင်းရဲမှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်…..” ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရှမ်ပြည်မှ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို သွားလှူရင်း တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့လမ်းမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အမှတ်တရတွေကို ပြောပြလာတဲ့ အိစိကွေး
အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းသူတွေ အဆင်ပြေအောင် Follower (7) သိန်းကျော်ရှိတဲ့ သူရဲ့အကောင့်ကနေ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ